We Fight We Win. -- " More than Media ": ပြည်တွင်းမီဒီယာကို အစိုးရမှနည်းမျိုးစုံဖြင့်ခြိမ်းခြောက်။
သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ The Voice Weeklyဂျာနယ်အားတရားစွဲဆိုခြင်းသတင်းကိုမဖော်ပြ ကြရန်နှင့်မည်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်မှထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုလုပ်ကြရန်စာပေစီစစ်ရေး(စာပေကင်ပေတိုင်)လူကြီးများဖုန်းဖြင့်လိုက်လံနိူးဆော်လျက်ရှိပြီး၊အဆိုပါသတင်းနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်များ ပြုလုပ်ပါက အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထိုသို့ဖုန်းဖြင့်သတိပေးခြင်းခံခဲ့ရသည့်အပါတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်နှစ်ဆောင်၏တာဝန်ခံအယ်ဒီတာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်အယ်ဒီတာများကပြောကြားခဲ့သည် ။။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းသည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အရေးကြီးကြောင်းနှင့် သတင်းစီစစ်မှုလျော့ချပေးမည်ဟု ကြွေးကြော်ကာနိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုရလာစေရန်ပြည်ပအတိုက်အခံ နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုဖြင့်ရပ်တည်နေသော ဧရာဝတီ၊မဇ္ဈိမတို့မှအယ်ဒီတာချုပ်များကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံမှုများကို ပြသနေသော်လည်း ပြည်တွင်းမီဒီယာသမားများကို ခြိမ်းခြောက်မှုများ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာနသည်မကြာမှီကာလအတွင်း ပြည်တွင်းမှာထုတ်ဝေခွင့်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြည်ပမီဒီယာသမားသည်ကိုယ်ကျိုးအတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပူးပေါင်းကာလုပ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပြီးဂျာနယ်လစ်သမားစစ်စစ်များ မဟုတ်ကြောင်း လူထုစိန်ဝင်းမှ အင်တာဗျူးတခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
TheVoiceWeeklyဂျာနယ်အားသတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှတရားစွဲဆိုခြင်းအပေါ် ပြည်တွင်းဂျာနယ်မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ကန့်ကွတ်ရှုတ်ချမှုများပြောဆို ရေးသားခဲ့သော်လည်း ပြည်ပအခြေစိုက် ဧရာဝတီ၊မဇ္ဈိမ မီဒီယာတို့မှ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးငြိုငြင် မည်စိုးသောကြောင့် တလုံးတပါဒမျှပြောဆိုခြင်းမရှိဟု ပြည်တွင်းမီဒီယာလောကတွင်ဝေဖန်နေကြသည်ဟု ကြားသိရသည်။
i just wroteacomment in Irrawaddy blog like this:
လုပ် စားချင်တဲ့ ဧရာဝတိ၊မဇ္ဈိမ နဲ့ dvb ကလူ တွေ
ကျော် ဆန်း က အရင် သူတို့ကိုလှလှကြိး လုပ် စား
ခံနေရပြိ။ shame on you,opportunitists...!
they do not show this comment in their blog.
According to sayar U Sein Win's interview,
aung zaw , soe myint & aye chan naing are not
trustworthy people. they are disgusting traitors..!